१८ बैंकको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट आयो, कुनको वित्तीय अवस्था कस्तो ? – Banking Khabar
१८ बैंकको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट आयो, कुनको वित्तीय अवस्था कस्तो ?
बैंकिङ खबर । विहीबारसम्म १८ वटा बैंकले आफ्नो तेस्रो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । जसमध्ये, १६ वटा बैंकको मुनाफा गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा बढेको छ । सबैभन्दा धेरै नाफा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कमाएको छ भने जनता बैंकको नाफा सबैभन्दा कम रहेको छ । १६ वटै बैंकहरुको तेस्रो त्रैमासिक विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा दुई अर्ब ८३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव ३८ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकले दुई अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
१० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा पनि १० अर्ब ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा आठ दशमलव ६७ प्रतिशत वृद्धि गरी एक खर्ब ३० अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जामा १६ दशमलव ५९ प्रतिशतले वृद्धि गरी एक खर्ब १८ अर्ब ८६ करोड सात लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १८ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेर चार अर्ब ११ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा आठ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेर तीन अर्ब ७५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा ५९ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ६६ करोड ७० लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (वार्षिक) ३५ दशमलव ५५ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात (वार्षिक) १८ दशमलव ७६ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ दुई सय दुई दशमलव ५८ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, बैंकको निष्कृय कर्जा शुन्य ७६ प्रतिशत, जोखिमयुक्त सम्पतिमा १३ दशमलव २५ प्रतिशत र सिडि रेसियो ७८ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा दुई अर्ब ५६ करोड ७७ लाख २८ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.०६ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नेपाल बैंकले दुई अर्ब ५१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब चार करोड २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा पाँच अर्ब ९७ करोड ६८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा ८. १७ प्रतिशत वृद्धि गरी ९० अर्ब ८१ करोड ३२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जातर्फ ७.४१ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७९ अर्ब ७० करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी २५.५१ प्रतिशतले बढेर छ अर्ब ६० करोड ६३ लाख २८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको कर्मचारी खर्च, अन्य संचालन खर्च र व्याज खर्च सबै बढेको छ । यो अवधिमा ३१ करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खराबकर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा २६ करोड ३६ लाख नौ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको खराब कर्जा २.९१, निक्षेप लागत २.९७, प्राथमिक पुँजी, कर्जा र सीसीडी रेसियो ७६.४८, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर ४.९९ र आधार ब्याज दर बढेर ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ५.३४ प्रतिशतले घटेर ४२ रुपैयाँ ५७ पैसा पुगेको छ । प्रतिसेयर नेट वर्थ १७४.३१ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पुँजीकोष अनुपात १८.०२ प्रतिशत रहेको छ ।
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब ८० करोड ३४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ दशमलव १९ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एभरेष्टले एक अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा पाँच अर्ब ८५ करोड ३८ लाख १० हजार रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा १५ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि गरी एक खर्ब छ अर्ब ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले १९ दशमलव ८८ प्रतिशत वृद्धि गरी कर्जामा ८८ अर्ब १७ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकलको खुद व्याज आम्दानी २१ प्रतिशतले बढेर तीन अर्ब २५ करोड नौ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुुनाफा १८ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब ७९ करोड ८२ लाख नौ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा दुई करोड २६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रेभिजनमा ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव २३ प्रतिशत, जोखिमयुक्त सम्पत्ति १५ दशमलव ७० प्रतिशत, सिडि रेसियो ७५ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २९ दशमलब ९६ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात २६ दशमलब ६० गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ एक सय ७२ दशमलब ९३ रुपैयाँ र तरलता अनुपात ३७ प्रतिशत रहेको छ ।
हिमालयन बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चार दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा हिमालयनले एक अर्ब ५३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा पाँच अर्ब २० करोड २४ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा ९६ अर्ब ३२ करोड ४१ लाख रुपैयाँको संकलन गरेको बैंकले कर्जा ८५ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी पाँच प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब ९१ करोड पाँच लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा ११ दशमलव ३० प्रतिशतले घटेर दुई अर्ब १२ करोड ६३ लाख ६० ह जार रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा २७ करोड २२ लाख रुपैयाँ खराबकर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ३५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राखेको छ
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २५ दशमलव ८१ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी २३ दशमलव ६३ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ एक सय ६३ दशमलव ६१ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २१ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, बैंकको निष्कृय कर्जा एक दशमलव १९ प्रतिशत, जोखिमयुक्त सम्पति १२ दशमलव ४४ प्रतिशत, सिडि रेसियो ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंक ले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४१ दशमलव ८५ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा स्टाण्डर्ड चार्टर्डले एक अर्ब छ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब एक करोड १४ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा पाँच अर्ब ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा १२ दशमलव २९ प्रतिशतले घटाएर ६१ अर्ब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंक ले कर्जातर्फ २४ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ४६ अर्ब ४० करोड ६९ लाख रुपैयाँ लगानीे गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ४३.८० प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा ४३.३४ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा चार करोड ५८ लाख छ हजार रुपैयाँ राइट ब्याक गरेको बैंकले प्रोभिजनमा १३ करोड ८८ लाख ९० हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (वार्षिक) २५ दशमलव १२ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीेको अनुपात (वार्षिक) ३४ दशमलव ०३ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय ६६ दशमलब ९३ रुपैयाँ, पूँजीकोष अनुपात २२ दशमलव ६८ प्रतिशत र निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव २१ प्रतिशत रहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब ४४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई दशमलव १२ प्रतिशत कम नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ग्लोबल आईएमईले एक अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकको जगेडाकोषमा तीन अर्ब ८६ करोड ११ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा १९.५३ प्रतिशत वृद्धि गरी एक अर्ब दुई अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जातर्फ २१.७९ प्रतिशतले वृद्धि गरी ८९ अर्ब छ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी एक दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेर दुई अर्ब ६१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा सात दशमलव ०८ प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ८१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा ३५ करोड ६१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राइट ब्याक गरेको बैंकले प्रोभिजनमा २१ करोड ९२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको निष्कृय कर्जा एक दशमलव २९ प्रतिशत, जोखिमयुक्त सम्पत्ति ११ दशमलव ७२ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी २१ दशमलव ६७ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात १४ दशमलव ३५ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १४३ दशमलव ४४ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २६ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ ।
एनएमबि बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३ दशमलव ३० प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एनएमबिले एक अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
छ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको एनएमबि बैंकले जगेडाकोषमा पाँच अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा १९ दशमलव ८८ प्रतिशत वृद्धि गरी ८५ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जामा २२ दशमलव ८६ प्रतिशत वृद्धि गरी ७४ अर्ब एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १३ दशमलव २८ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब १० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा ४४ दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खराबकर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको निष्कृय कर्जा एक दशमलव १० प्रतिशत, जोखिमयुक्त सम्पत्ति १२ दशमलव ९३ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिक २९ दशमलव ०९ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात वार्षिक १५ दशमलव २९ गुणा, तरलता अनुपात २५ दशमलव ३६ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ एक सय ८७ दशमलव २१ रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४ दशमलव ९४ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नेपाल एसबीआईले एक अर्ब १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब चार करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकले जगेडाकोषमा चार अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा दुई प्रतिशतले घटेर ८३ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ बैंकले कर्जामा ७४ अर्ब पाँच करोड २७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ३१ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा २१ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्रै खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा १५ करोड १३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको निष्कृय कर्जामा शुन्य दशमलब १३ प्रतिशत, पुँजीकोष १४ दशमलव ५१ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिक २२ दशमलव ८६ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात २४ दशमलव ०६ गुणा, नेटवर्थ एक सय ५१ दशमलव ६९ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २५ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ ।
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ दशमलव ०२ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सिद्धार्थले ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब एक करोड २१ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा तीन अर्ब ६० करोड १५ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ । निक्षेपमा २० दशमलव नौ प्रतिशत वृद्धि गरी ९० अर्ब ४० करोड १९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जामा २० दशमलव ५६ प्रतिशत वृद्धि गरी ७९ अर्ब ८८ करोड आठ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १७ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब २० करोड पाँच लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा २८ दशमलव ९० प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ५२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ खराबकर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको निष्कृय कर्जा एक दशमलव ३१ प्रतिशत, जोखिमयुक्त सम्पत्ति १२ दशमलव ३० प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिक २० दशमलव ५२ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात १४ दशमलव ८६ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १४४ दशमलव ९५ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २१ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४२ दशमलव ५४ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ८८ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा खुई अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेपमा ३२ प्रतिशत वृद्धि गरी ७४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जातर्फ ६६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी २८.८० प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा४० प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा १५ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
प्राइम बैंकको निष्कृय कर्जा १.०६ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ८९ पैसा, मूल्य आम्दानी अनुपात १४ दशमलव १२ गुणा, किताबी मूल्य १ सय ३३ रुपैयाँ १२ पैसा, प्रतिसेयर कुल सम्पति मूल्य १ हजार ८१ रुपैयाँ ७१ पैसा तथा तरलता अनुपात २० दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ ।
सानिमा बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब २० करोड ५६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा २७ दशमलव ३३ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सानिमाले ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब १२ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडा कोषमा दुई अर्ब २५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । निक्षेपमा ३३ दशमलव ८७ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७१ अर्ब ५३ करोड नौ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जामा ३२ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि गरी ६४ अर्ब ३२ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी २५ दशमलव ६० प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब सात करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा २८ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ८४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा ७४ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै राइट ब्याक गरेको बैंकले प्रोभिजनमा १९ करोड ९० लाख ५२ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको जोखिमयुक्त सम्पति १३ दशमलव १५ प्रतिशत, निष्कृय कर्जा शून्य दशमलव १७ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी (वार्षिक) २० दशमलव २२ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानीको अनुपात १७ दशलमव सात गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ एक सय २८ दशमलव २८ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २२ दशमल ९९ प्रतिशत रहेको छ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड तेस्रो त्रैमासमा आएर अर्वपति क्लबमा प्रवेश गरेको छ । बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.३९ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सिटिजन्सले ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राखेको छ । बैंकले ६० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि ५५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । गत वर्ष भने ५५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकन गरि ४७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १७ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ३२ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा ४० करोड ३२ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा संकलन गरेको बैंकले प्रोभिजनमा २४ करोड ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको निष्कृय कर्जा एक दशमलव ४६ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी १५ दशमलव ७६ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ एक सय २९ दशमलव ५६ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २२ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको छ ।
सनराइज बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ९४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नौ दशमलव ८१ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सनराइजले ८५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडा कोषमा दुई अर्ब ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । निक्षेपमा १२ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि गरी ६५ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जामा १३.९१ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५७ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १९ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा एक प्रतिशतले घटेर एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा ४१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको पूँजीकोष अनुपात १४ दशमलव ३९ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १५ दशमलव ४१ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानीको अनुपात १५ दशलमव ८४ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय ३० दशमलव ११ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २४ दशमल ३८ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले चालु आर्थिका वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ९३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चार दशमलव ९४ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंक अफ काठमाण्डूले ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
सात अर्ब सात करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकको जगेडाकोषमा चार अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । निक्षेपमा ७३ अर्ब ९० करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जामा ६७ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी छ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब छ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा चार प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ३१ करोड चार लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा १० करोड ३२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ राइट ब्याक गरेको बैंकले प्रोभिजनमा २८ करोड ३५ लाख २५ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको निष्कृय कर्जा एक दशमलव ८२ प्रतिशत, पूँजीकोष १५ दशमलव ०२ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिक १७ दशमलव ५४ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात वार्षिक १९ दशमलव ०४ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १६२ दशमलव ७५ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २६ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ९२ करोड ७६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशत अर्थात २१ करोड सात लाख रुपैयाँ कम नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एनआईसी एशिया बैंकले एक अर्ब १३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब तीन करोड ११ लाख १७ हजार रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको बैंकले जगेडा कोषमा तीन अर्ब एक करोड ८२ लाख सात हजार रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा ६९ प्रतिशत वृद्धि गरी एक खर्ब ३३ अर्ब ७२ करोड ६५ लाख ९० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जातर्फ एक खर्ब आठ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख १४ हजार लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ४४ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब ६५ करोड ५२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा ८.८६ प्रतिशतले घटेर एक अर्ब २१ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । यो अवधिमा १८ करोड दुई लाख नौ हजार रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ५१ करोड ३३ लाख १८ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
चैत मसान्तसम्म बैंकको कर्जा शून्य दशमलव २२ प्रतिशत, तरलता अनुपात २० दशमलव ४२ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी १५ दशमलव ४९ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३७.५८ रुपैयाँ रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा लक्ष्मी बैंकले ८० करोड २६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४१ दशमलव शुन्य चार प्रतिशत बढी नाफा कमाएका हुन् । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा लक्ष्मीले ६४ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकको जगेडाकोषमा दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निक्षेपमा नौ दशमलव ४६ प्रतिशतले वृद्धि गरी ६३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जातर्फ करिव १४ प्रतिशतले बढेर ५८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँबाट बढेर एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँबाट बढेर एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा चार करोड ३८ लाख सात हजार रुपैयाँ मात्रै राइट ब्याक गरेको बैंकले जोखिम व्यवस्थापन कोषमा २३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी झन्डै ४५ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेर १३ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम भएको भने निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव ६३ प्रतिशतले घटेर एक दशमलव १६ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यस्तै, बैंकको जोखिमयुक्त सम्पत्ति १२.९७ प्रतिशत, तरलता अनुपात १७.२३ प्रतिशत, प्रतिसेयर नेटवर्थ एक सय २६ रुपैयाँ ३८ पैसा र प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य दुई सय ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ६३ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक सय दुई दशलमव ६२ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमामिा सेञ्चुरीले ३१ करोड नौ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब छ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा एक अर्ब २१ करोड २३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा ५२ अर्ब ७३ करोड २७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जामा ५० अर्ब दुई करोड ७९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ५९ दशमलव २७ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा ८१ दशमलव १० प्रतिशतले बढेर ८५ करोड ३७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा १३ करोड २० लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ११ करोड ८५ लाख २३ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १० दशमलव ४२ रुपैयाँ, निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव ७६ प्रतिशत र पुँजीकोष अनुपात १६ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ ।
जनता बैंक नेपाल लिमिटेड
जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंक ले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५० दशमलव ७६ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा जनताले ३८ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्याएको बैंकले जगेडकोषमा ६३ प्रतिशतले वृद्धि गरी एक अर्ब ३७ करोड सात लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा ५३ दशमलव ९४ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५४ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जातर्फ ५३ दशमलव ९४ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५१ अर्ब १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १११ दशमलव २७ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा ४८ दशमलव २५ प्रतिशतले बढेर ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ३६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव ०३ प्रतिशतले घटेर एक दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीकोष अनुपात शुन्य दशमलव ०३ प्रतिशतले बढेर १६ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी नौ दशमलव ५९ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात १७ दशमलव ०९ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ एक सय १७ दशमलव १३ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २३ दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको छ ।